कसरी लेबिया minora को adhesions सामना गर्न? adhesions, आफ्नो कारण र उपचार के हो
धेरै मानिसहरू adhesions कसरी रोग संग र चाहे त्यो उपचार मा राम्रो परिणाम हासिल गर्न सम्भव छ सामना गर्न के आश्चर्य। यो समस्या 6-8 वर्ष को उमेर को बीच बालिका हुन्छ। यस्तो रोग कहिलेकाहीं मात्र योनी भट्ठा कवर, र पनि केही अवस्थामा यो urethra, एक स्पाइक लेबिया implies।
बालिका मा adhesions के हुन्
यो ज्यादातर बच्चा को जवानी मा पाइएको एक एकदम साधारण घटना छ। यो रोग अवस्था पनि लेबिया एक coalescence वा टाँसिएको छ।
तथ्याङ्क अनुसार, एक निश्चित हदसम्म यो महिला बच्चाहरु को 3% मा हुन्छ, तर उत्पन्न गर्न सक्छ र प्राय। यो कुरा यस विकृति सधैं किन आमाबाबुले अक्सर मान दिन छैन जुन बच्चा, चिन्तित छैन भन्ने छ। ठूलो र सानो लेबिया सँगै बढ्न सक्ने एउटा तथ्य द्वारा मतलब Synechia। यस मामला मा योनी खोल्ने ओभरल्याप र मूत्र को outflow एकदम जटिल छ। तिनीहरूले उत्पन्न र कसरी यो सामना गर्न, तपाईं उपचार मा धेरै राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ जो कारणले त्यस्तो adhesions, थाह।
बच्चा मा Adhesions मुख्य जो जन्मजात असामान्यताहरु को उपस्थिति छ विभिन्न कारण लागि खडा। साथै, गर्भवती महिला को शरीर मा एस्ट्रोजन को एक अपर्याप्त सामग्री यो दोष परिणाम उपस्थिति। पहिले नै उल्लेख रूप मा, लेबिया minora को adhesions योनी को प्रवेश बन्द मानिन्छ। परिणाम यो द्वारा निम्न कारक:
को लेबिया minora को पनि बारम्बार लुगा धुने;
असहज लुगा वा कृत्रिम कपडे को अंडरवियर लगाएका;
को urethra मा संक्रमण उपस्थिति;
निस्सन्देह, जनन बालिका को स्वच्छता पालना गर्न निश्चित हुन, तर पनि बारम्बार र तीव्र लुगा धुने को लेबिया को clumping हुन सक्छ किनभने सबै, ठिक्क गर्नुपर्छ। यस बालिका, सामान्य कस्मेटिक साबुन सफाई यो ऊतक क्षति निम्त्याउँछ रूपमा लागि प्रयोग विशेष गरी हानिकारक।
को लेबिया minora को Synechia38 वर्ष देखि, उदाहरणका लागि, नवजात मा, तर पनि पुरानो बालिका बीच मात्र होइन उठ्न सक्छ। यो मुख्य रूप किनभने धेरै तंग र असहज अंडरवियर कृत्रिम कपडे बनेको लगाएका को हुन्छ। एक परिणाम रूपमा जनन मा, अत्यधिक दबाव, र यो विकृति हो। बालिका मा लेबिया minora को फ्युजन किनभने लामो भडकाऊ प्रक्रिया उपस्थिति पनि हुन्छ। अक्सर, यो एक latent फारममा हुन्छ र अलिकति राता रूपमा देखिन्छ। तपाईं एक समय तरिका उपचार पूरा छैन भने, जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्छ।
बाल हेरविचार को मुद्दा सबै अरूबाट अलग छोराछोरीको लुगा धुन, र ध्यानपूर्वक फलाम फलाम, धेरै जिम्मेवार आवश्यक व्यवहार गर्छन्। vulvar mucosa irritants विभिन्न प्रकारका धेरै संवेदनशील छ र क्षति गर्न susceptible छ रूपमा त्यहाँ, एउटा एलर्जी छ भने लेबिया minora को Synechia उत्पन्न हुन सक्छ।
adhesions लक्षण एकदम उच्चारण, त्यसैले तिनीहरू बच्चा अन्य pathologies संग छैन भ्रमित गर्न सकिन्छ। केटी सानो र फ्यूज लेबिया majora को समस्या देखि ग्रस्त हुन सक्छ। यसबाहेक मूत्र को outflow को समस्या हुन सक्छ। यस मामला मा, बच्चा महत्वपूर्ण बेचैनी, पेट दुखाइ र बारम्बार urination अनुभव। रोग एक एलर्जी कारण खडा भएको छ भने, त्यसपछि बाहेक पनि गंभीर खुजली र बलिरहेको अवलोकन गर्न सकिन्छ।
विकृति को उपस्थिति मा बच्चा राता र जलन हुन सक्छ। केटी बेचैन बन्छन् र हिड्ने बेला बेचैनी को complains। त्यहाँ बच्चालाई समस्याहरू अस्तित्व बारे कुनै शंका छ भने, तपाईं छोराछोरीको स्त्रीरोग विशेषज्ञ भ्रमण गर्न आवश्यक छ। उहाँले सही निदान बनाउन र चोट लागेको र संक्रामक प्रक्रिया रोक्न गरिन आवश्यक के निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
बालिका मा लेबिया अन्ततः बाक्लो हुन्छ जो पातलो फिलिम, लगभग पारदर्शी सामेल र रूपमा उपचार, रूपमा प्रारम्भिक सकेसम्म सुरु गर्नुपर्छ। पूरा फ्युजन सुधार को उपस्थिति मा मात्र सर्जरी द्वारा बाहिर छ।
को लेबिया minora को Adhesions मिल्दाजुल्दा योनी भट्ठा provokes जो, तिनीहरूको बीचमा फ्यूजन भनिन्छ। को निदान सामान्यतया प्रारम्भिक परीक्षा, डाक्टर पछि पुष्टि भएको छ। एक वर्ष बाल अप बाल विशेषज्ञ र पुरानो बालिका केलाउँदा - बाल स्त्रीरोग विशेषज्ञ। आशङ्का अतिरिक्त परीक्षा को लागि एक संक्रामक प्रक्रिया को उपस्थिति मा निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यस मामला मा, निम्न विश्लेषण:
वनस्पति मा smears;
व्यापक सर्वेक्षण डाक्टर निम्न विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गरेर योग्य उपचार प्रदान।
हामी कसरी व्यवहार
धेरै आमाबाबुले एक बच्चा टाँसिएको adhesions कसरी उपचार गर्न र सबै भन्दा राम्रो तरिका यस्तो अवस्थामा लिन भनेर सोच को लेबिया को उपस्थिति बारे चिन्तित हुनुहुन्छ। सामान्यतया, उपचार, को विकृति को प्राथमिक कारण आधारित चयन गरिएको छ। त्यहाँ कठिनाई यस मामला मा, वी डी प्रक्रिया बिना adhesions को थालनी चरण हो भने, तपाईं आवश्यक:
मालिश र लेबिया minora को अलग नियमित;
एस्ट्रोजन लाइनमा splice मलम लागू।
यसबाहेक पनि genitourinary सिस्टम को संक्रमण सम्बन्धित भने, यो एंटीबायोटिक उपचार को एक पाठ्यक्रम उतरदायित्व लिनु गर्न, साथै Fungi वृद्धि रोक्न probiotics र लागूपदार्थ आवश्यक आवश्यक छ। adhesions एलर्जी उपस्थितिको कारण उत्पन्न भने, यो द्रुत समस्या को कारण निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस मामला मा, तपाईं एस्ट्रोजन एक क्रीम लागू र recurrences रोक्न प्रयास गर्न आवश्यक छ। साथै, एलर्जी हटाउनु मदत गर्नेछ जो, एक विशेष आहार बच्चा नियुक्त गर्न सकिन्छ।
को विकृति पर्याप्त गम्भीर छ र त्यहाँ एउटा समस्या urination र बेचैनी छ भने, डाक्टर एक कट adhesions खर्च गर्न सुझाव दिन्छौं।
लोकप्रिय विधिहरू जो द्वारा उपचार बाहिर गर्न सकिन्छ पनि छन्। आफ्नो बच्चा लेबिया एक मर्ज छ, र यो केही असुविधा छ भने, यो जडीबुटी को एक decoction संग विशेष न्यानो स्नान मद्दत गर्न सक्छ। तिनीहरूले प्रभावकारी सुनिंनु हटाउनु र मांसपेशीमा आराम।
तपाईं अगाडि देखि पनि टाढा केटी धुन सक्छन् जडीबुटी को decoction फिर्ता गर्न। स्वच्छ प्रक्रियाहरु पूरा गरेपछि splice समुद्र buckthorn तेल चिकनाना गर्न। तर, यो पनि बारम्बार र गहन स्वच्छता पनि बच्चा चोट हुन सक्छ रूपमा, संयमता पालन गर्न आवश्यक छ।
धेरै गम्भीर अवस्थामा, एक हर्मोन प्रभाव संग घाँस लागू, तपाईं लेबिया को आसंजन को decoction प्रक्रिया स्थानहरू बनाउँने र त्यसपछि आवश्यक छ।
केही अवस्थामा मा, असामान्यता महत्वपूर्ण छ र दिन्छ भने ठूलो बेचैनी बच्चा मात्र adhesions एक शल्य उन्मूलन हुन सक्छ। सञ्चालन यो लगभग पीडारहित छ किन छ जो आधुनिक प्रविधी को प्रयोग, संग गरिन्छ। यद्यपि, महत्वपूर्ण भूमिका मनोवैज्ञानिक पक्ष द्वारा प्ले।
को dissection एक स्केलपेल संग गरिन्छ, र सञ्चालन मात्र केही मिनेट लागि जारी छ। रिकभरी अवधि एकदम दर्दनाक, यो समयमा त राम्ररी स्वच्छता लागि हेर्नुहोस्। urinate गर्न चोट छैन, र निको लिए चाँडै पर्याप्त औषधीय जडीबुटी संग ठाँउ हिप स्नान, बच्चा नियुक्त गरिनेछ, लोशन र विरोधी-जीवाणु लेप।
अपरेसन बेला अनुभव जडानमा, केटी कहिलेकाहीं त्यहाँ पछि उनको यौन जीवनको गुणस्तर असर गर्न सक्छ भन्ने स्नायविक विकारहरु छन्। किन डाक्टर मात्र सबैभन्दा चरम अवस्थामा बाहिर सर्जरी लगे छ।
तर, सञ्चालन फ्युजन फेरि आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। स्पाइक फेरि लेबिया बीच उत्पन्न हुन सक्छ। आमाबाबु हो, को पाठ्यक्रम, सञ्चालन पूरा गर्न सहमत आवश्यक छैन, तर कहिलेकाहीं यो बस आवश्यक छ।
यो रोग को रोकथाम उचित व्यक्तिगत स्वच्छता खेल्छ मा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, आमा सही केटी धुन कसरी टाढा जान्नु आवश्यक छ। यो, न्यानो चलिरहेको पानी गर्नुपर्छ ध्यान आफ्नो हात धोइदिनुभएर पछि। गुदा र जनन संक्रमण रोक्न विभिन्न हात धुन टाढा छ।
पानी को धारा फिर्ता गर्न अगाडि देखि योनी गर्न निर्देशित हुनुपर्छ। मात्र गुणस्तर प्रमाणित स्वच्छता, राम्रो बच्चाहरु प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्। तिनीहरूले संरचना ट्रेस तत्व को र एकै समयमा अनुपस्थित allergens मा एक सेट समावेश गर्नुपर्छ साथै, एक तटस्थ पीएच हुनुपर्छ। वयस्कहरूको लागि प्रयोग स्वच्छता उत्पादनहरु लागि सिफारिस गरिएको छैन। केटी धुन कसरी टाढा बुझेर तपाईं विभिन्न समस्या को एक नम्बर जोगिन सक्छौं।
चिकित्सकीय मालिश र विशेष स्नान
धेरै उपयोगी जडीबुटी र मालिश को विशेष सत्र को वाहेक संग एक स्नान हुन सक्छ। को मालिश हुनुपर्छ समयमा पूर्व-lubricated हात salve "Bepanten"। आसीन स्नान लागि जस्तै राम्रो जडीबुटी हो:
उपचार को अवधि 10 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन। तपाईं त एक बच्चाको जनन चिकनाना गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कुनै पनि additives बिना तेल प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। मालिश दबाव बिना औंलाहरु stroking उज्यालो द्वारा हो। तर, आन्दोलन गर्ने लेबिया एक क्रमिक अलग गर्न निर्देशित हुनुपर्छ। परिणाम यो कारणले, तपाईं केटी दुखाइ कारण छैन प्रयास गर्नुपर्छ, तुरुन्तै सजिलै देखिने हुनेछ।
यो तपाईं आंशिक रूप adhesions छ भने मात्र यस्तो प्रक्रिया घरमा बाहिर छन् सम्झना हुनुपर्छ, uneventful थियो। जडीबुटी र तेल प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले एलर्जी को संभावना विचार गर्न आवश्यक छ।
विशेष nanodiamonds उपयोग गरदै को प्रयोग
यदि adhesions केही असुविधा र soreness सँगसँगै छन्, उपचार को मानक विधि एस्ट्रोजन वा साधारण छोराछोरीको क्रीम संग विशेष nanodiamonds उपयोग गरदै को आवेदन implies। एक कडाई गर्ने जनन को सतह बाँकी स्पर्श गर्न प्रयास, औंला टांका लाइन आवश्यक मा मलम लागू हुन्छ। अक्सर, डाक्टर यो उद्देश्य "Traumeel" वा "Ovestin" को लागि सल्लाह दिन्छन्। अक्सर, यी लागूपदार्थ अन्य एजेन्ट संग संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ।
चिकित्सा को अवधि2हप्ता wherein को लेप प्रति दिन 1-2 पटक लागू छ। डाक्टर त्यसपछि आवश्यक छ भने, पुन उपचार नियुक्त, परिणाम मूल्यांकन र।
रोक्न बालिका मा adhesions को उद्भव सजिलो छ। यो गर्न, निम्न निवारक उपाय पालन गर्न निश्चित हुन:
गुफा आधारभूत नियमहरू पालन गर्न;
colorants र flavorings बिना स्वच्छता चयन;
को vulva को श्लेम लाग्एको झिल्ली मा साबुन को ठूलो रकम संग सम्पर्क जोगिन;
तिनीहरूलाई आवश्यक रूपमा मात्र प्रयोग समसामयिक परिवर्तन डायपर,;
मात्र गुणस्तर अंडरवियर प्राकृतिक कपास बाट बनेको किन्न;
प्रत्येक urination पछि साबुन बिना जनन धुन।
बच्चा एक्लै विकृति पारित गरेको छ भने, निवारक उपाय अझै पनि त्यहाँ कमजोरीको वशमा पऱ्यौं को एक उच्च likelihood छ रूपमा, पालना गर्न आवश्यक छ। यो यौवन अवस्था सम्म जनन बालिका अवस्था अनुगमन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उनले पहिलो विकृति देखा गर्दा, यो उपलब्ध गन्तव्यहरू अनुसार, एक डाक्टर देख्न, र त्यसपछि मात्र उपचार पूरा आवश्यक छ।
Adhesions अक्सर त्यहाँ स्वास्थ्य मा कुनै हानिकारक प्रभाव हुन्छन् किन जो छ, सानो भएको बालिका छन्। यस्तो विकृति सामान्य urination हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ तर बेचैनी को घटना प्रकुपित छैन। तर समय जो बच्चा को प्रजनन अङ्गहरू को सामान्य विकास रोक्न हुनेछ, को स्पाइक, वृद्धि गर्न सकिन्छ, र भविष्यमा बिगडा प्रजनन नेतृत्व हुनेछ। यस मामला मा, यो राम्ररी बालिका को स्वास्थ्य र विकास निगरानी गर्न निश्चित छ।
अधिक खतरनाक अवस्थामा, यो लेबिया बीच स्पेस बन्द, रहिरहन्छ भन्ने संक्रमण फैलाउने लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्छ। यस मामला मा, नतिजा पनि रोगजनकों शरीर भर फैलाउन झुकाव छ किनभने, दयनीय हुन सक्छ। कि डाक्टर गर्न समसामयिक उपचार महत्त्व एक व्यापक उपचार सञ्चालन गर्न किन छ।
adhesions को घटना मा, धेरै डाक्टर बालिका समस्या सच्याउन लागि कुनै पनि स्वतन्त्र कारबाही गर्न सिफारिस, तर बच्चा सबै समय मा एक चिकित्सक को पर्यवेक्षण हुनुपर्दछ।
तपाईं उर्दी पछि काम गर्न जान किन यति गाह्रो छन्?
ग्रीवा मोड्नु के हो?
उत्पादनहरु सूची: जो ओमेगा-6 समावेश
हामी घर मा हिउँ बनाउन सक्छ के बाट?